Amniga – Bogga 4 – Windows – Vessoft
1Password – maamule sirta ah oo si ammaan ah loogu keydinayo xogta isticmaale ee sirta ah kaydinta qarsoon.
eScan Anti-Virus – waa barnaamij kumbuyuutar-ka-hortagga ee Teknolojiyada MicroWorld si looga ilaaliyo kombiyuutarkaaga ka dhanka ah virus-yada, borotiinka, spam, iyo weerarada shabakada.
Dhiirigelintaani waxay leedahay heer asaasi ah oo ah ilaalin, farsamooyinka falanqaynta farsamooyinka iyo fariin email ah si looga ilaaliyo kombuyuutarka noocyada kala duwan ee hanjabaadaha.
eScan Total Security Suite – waa xal dhammaystiran oo ka hortaga faylalka oo taageeraya teknolojiyada daruuriga iyo caafimaadka leh si loo ilaaliyo kombiyuutarkaaga, iyo sidoo kale aalado dheeraad ah oo loogu talagalay kobcinta nidaamka iyo hagaajinta.
eScan Internet Security Suite – barnaamij softiweer ah oo taageeraya iskaanka wax ku oolka ah ee farsamada, teknolojiyada daruuraha iyo istaraatiijiyada isku dhafka ah ee ogaanshaha halista cudurka.
Comodo Internet Security Pro – antivirus waxay taageertaa falanqaynta dabeecadda, firewall, scanner daruuraha, HIPS, sanduuqa ciida iyo teknolojiyadda kale ee cusub ee ilaalinta.
Comodo Cloud Antivirus – fayrasku wuxuu taageeraa dhowr qaybood oo ilaalin ah sida kumbuyuutar daruuriga ah, xannibaada dabeecada iyo galka tooska ah ee feylasha aan la aqoon.
BullGuard Ilaalinta Premium – waa qalab dhammaystiran oo aalado amniga ah si looga hortago khataraha internetka, laga ilaaliyo khalkhalinta lagana hortago gelitaanka shabakada guriga.
Adaware Antivirus Pro – fayraska wax ka difaaca teknoolojiyadda amniga ee soo-saareyaasha wax soosaarayaasha saddexaad ee soo-saarka ah si ay u siiyaan ilaalinta ugu badan ee kombiyuutarkaaga.
Awoodda Anware Free – fayraska iyo ashyaa’da halista ah ee hal barnaamij loogu talagalay kahortagga labada dhinac ee looga soo horjeedo hanjabaadaha fayraska ugu caansan iyo noocyada kala duwan ee feylasha.